Linus Torvalds inokurudzira vashandisi kuti vasashandise RC1 vhezheni yeLinux 5.12 | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapfuura isu tinogovana pano pa blog nhau nezve kuburitswa kweiyo yekutanga RC yeiyo ichave inotevera vhezheni yeKernel Linux 5.12, Iyo yeiyi vhezheni 5.12-rc1, Linus Torvalds akaitumidza kuti Frozen Wasteland, nekuti zvakatanga nechando madutu echando munzvimbo yePortland iyo yakacheka zviuru zvemiti uye ikatorera kota yemiriyoni yevamwe simba.
Kwemazuva matanhatu, Linus akazviwanawo asina simba, izvo zvaimutadzisa kushanda pahwindo reiyo fusion. Asi mushure mevhiki rino rekutanga rakashatiswa nemamiriro ekunze emamiriro ekunze, Linus akakwanisa kubata kumashure uye akazivisa kuburitswa kweLinux 5.12-rc1 mukupera kwaKukadzi sezvakange zvakarongwa.
Mune ino yekutanga kuburitswa mumiriri weLinux 5.12, kusimbiswa kwakaiswa pakuchenesa kodhi, senge OPROFILE rutsigiro, Intel MID rutsigiro, Intel Nyore Firmware Interface rutsigiro, mamwe mapuratifomu ekare uye echinyakare eARM, madhiraivha akati wandei akabviswa. Padivi peichi chiitiko chekuchenesa, kuwedzerwa kwakawanda kwakaitwawo. Tine, pakati pevamwe, rutsigiro rweIntel ASIC N5X uye Snapdragon 888 mapuratifomu, rutsigiro rwuri nani rweMicrosoft Surface zvishandiso, kusanganisa kweakasiyana madhiraivha eX86, rutsigiro rweAdreno 508/509/512 GPUs muMSM, rutsigiro rweSiFive FU740 uye HiFive Isingaenzanisirwe RISC- Makadhi. V, achiwedzera NUMA tsigiro yeRISC-V, yekuwedzeredza rutsigiro rwe AMD Radeon RX 6800/6900 akateedzana maGPU, nezvimwe.
Mushure mekuzivisa iyo Linux 5.12-rc1 kuburitswa pakupera kwemwedzi wapfuura, Linus akaita yechipiri kukanda mazuva mashoma apfuura kuraira pamusoro pekushandisa kweuyu musarudzo. Kuti aite kuti anzwike, akatumidza iyi vhezheni kuti "v5.12-rc1-dontuse" mune yako git muti kunyevera vashandisi zvekuita neshanduro iyi.
Linus anotsanangura kuti kodhi kurerutsa uye kuchenesa kwakaitwa muLinux 5.12-rc1 uko pasina zviyeuchidzo zvakagadzirwa. Nekudaro, izvi zvakaguma muna:
"Bhugi inosemesa uye isinganetsi iyo mafaera ekupepa akamira kushanda nemazvo, akamira kushanda nenzira yakaipa kwazvo: swapfile start offset yarasika."
Kazhinji, zvikanganiso zvinokonzerwa nekodhi shanduko zvinoonekwa otomatiki, asi kodhi yekubheja yakasiyana, sezvo "paging mafaera asiri echinyakare". Anowedzera kuti haapi mhosva vagadziri vaifanirwa kubata mhando idzi dzebugs, achicherekedza kuti zvaisave nekuda kwekushamisika kwenguva yeyekusanganisa hwindo, chero. Kwaari, ichi chaingova chipenga chisina kujairika chakaonekwa uye chakasarudzika mumuti uripo.
Linus inojekesa kuti kana iyi yazvino vhezheni yekuyedza ikashandiswa, unogona kupedzisira uine systemystem izvo zvinonyanya kunyorwa neakasarudzika swap data. Nhau dzakanaka ndedzekuti, kazhinji, kugoverwa kwakawanda nekumisikidza shanduko yezvikamu panzvimbo yekuchinjana mafaera. Asi Ubuntu, inova imwe yeanoshandiswa zvakanyanya kugoverwa kweLinux, anga achiisa swap mafaera nekutadza kweanopfuura makore mana. Kune vashandisi veUbuntu (kana kupihwa kwakatorwa seMint), yambiro iyi kubva kuLinus inopfuura nguva, nekuti kushandisa iyi yazvino vhezheni yekernel kune mukana wakakura wekuti kukanganisa uku kuchaparadza iyo faira system.
Pamusoro peiyi nyaya inogona kukanganisa kugovera kunoshandisa paging mafaera, Linus anotsanangura kuti akawedzera iyo "dontuse" tag mune yake yeruzhinji git muti kuti vanhu varege kuyedzwa kutanga bazi idzva. Kernel kubvira iyi yazvino vhezheni. Kazhinji zvese zvinoenda mushe nevanoburitswa musarudzo, asi panguva ino Linus inokurudzira kupokana nekuishandisa sezvo inogona kushanda zvakanaka pasisitimu uchishandisa chinjana, asi inopera zvisirizvo kune masisitimu anoshandisa kuchinjanisa.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvenhau dzakaziviswa naLinus Torvalds, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus Torvalds inokurudzira vashandisi kuti vasashandise RC1 vhezheni yeLinux 5.12
Chipo chinobisa akadaro
Nhau dzakanaka ndedzekuti, kazhinji, akawanda anoparadzirwa nekusarudzika shandura zvikamu panzvimbo yekuchinjana mafaera.
Mazhinji kupatsanurwa anoshandisa swap migove panzvimbo ye memory swap mafaira.
Pindura Don checker